Rawr, Ditty, iyo Houseparty waa mustaqbalka farriimaha
Farriinta kuma koobna qoraalka iyo sawirrada. Eeg saddex siyood oo cusub oo mustaqbalka la xidhiidha isgaadhsiinta gacanta. Henrik Sorensen / Getty Images
Waxaa jira siyaabo badan oo loola xiriiri karo adeegsashada farriimaha farriimaha maanta - fursadaha kaliya ayaa sii kordhaya. Facebook Messenger, Snapchat, Whatsapp, Kik, Viber, farriimaha qoraalka ah ee xitaa wanaagsan ayaa ah doorashooyinka oo dhan. Laakiin qaar badan oo ka mid ah goobaha hadda jira waxay xadidaan fariimahaaga farriimahaaga qoraalka, sawirrada, iyo laga yaabee qaar ka mid ah fiidiyowga. Laakiin taasi ma ahan xaddiga sida aan ula xiriiri karno haddii aan helnay qalab sax ah.
Gali jiilka xiga ee barnaamijyada farriinta. Barnaamijyadani waxay bixiyaan farsamooyin badan oo loogu talagalay abuurista farriimo kuwaas oo ah madadaalo iyo madadaalo. Iyo, waxay tilmaamayaan mustaqbalka meel fariin ah waa waayo-aragnimo hodan ah, waayo-aragnimo leh - dadku waxay leeyihiin xoriyad ay ku fariisiyaan farriimahooda siyaabaha aadka u habboon.
Aan eegno saddexda barnaamijyadood ee qaabeynaya mustaqbalka farriimaha.
Next: Farriintaada ku dar gabayga Ditty
Ditty: Farriintaada ku soo celi gabay
Farriintaada ku soo celi heesaha Ditty. Ditty
Ditty wuxuu ku jiraa hadafka ah in uu is-beddelo fariinta adigoo adeegsanaya qoraalladaada waxqabadka muusikada. Iyada oo kala duwan ee muuqaalada laga heli karo app this, oo ay ku jiraan awood u leh in lagu daro video, gifs, iyo sawirada iyo sidoo kale u habeynta qaabka heesaha aad fariin u galay, fursadaha dhabta ah aan xad lahayn.
Download oo fur furan app - waxaa loo heli karaa si gaar ah loogu talagalay mobile - iyo waxaa lagu soo bandhigay ikhtiyaarka si aad u qor fariin . Sidaas yeel, ka dibna guji xigta .
Waxaad maqli doontaa farriintaada heeso ah qaabka heesaha ku qoran sare ee app ah.
Ha jeclayn mooshinka? Dhib ma laha! Fiiri fallaadhka midigta sare ee shaashadda waxaana lagu soo bandhigi doonaa liis ah heeso si aad u dooratid, qaar bilaash ah, qaar ka mid ah diyaar u ah $ .99. Dooro heeso cusub oo fariintaada si dhakhso ah ayaa loo adeegsan doonaa.
Xogta dhabta ah ee fariintaada waxay ka muuqan doontaa sawirada dhaqdhaqaaqa marka ay heesaha, sheekooyinkaaga, ku ciyaaraan asalka. Waxa kale oo aad ku dari kartaa sawiradaada iyo fiidiyowyada, ama ka dooro noocyo kala duwan oo GIF ah oo lagu dari karo sawirkaaga.
Diyaar ma u tahay inaad la wadaagto abuuritaanka? Interface app wuxuu u fududeynayaa in ay u diraan asxaabta via fariin text, Facebook Rasmi ama xitaa la wadaagaan on Instagram. Waxa kale oo aad u kaydin kartaa telefoonkaaga, oo ku siin kara karti aad ku wadaagi karto goobaha kale ee bulshada iyo fariimaha.
Ditty waa hab xiiso leh oo lagu kordhin karo farriintaada adoo isticmaalaya muusikada iyo muuqaalada. Sii isku day!
Marka xigta: Gali adduunyo bulsho oo ku sheekaysanaya sawir 3D ah oo ku saabsan Rawr
Ku sheekeysta adduunka 3D iyadoo la isticmaalayo sawiradaada casriga ah ee Rawr. Rawr
Sida laga soo xigtay shabakadda shirkadda, Rawr Rasul "waa jiilka xiga ee jiilalka soo socda, oo soo bandhigaya isgaadhsiin cusub iyada oo loo marayo avatars la soo saari karo iyo qoraaga noloshiisa oo loo yaqaan animate."
App Rawr Rasmiga Rasmiga ah wuxuu bixiyaa siyaabo badan oo xiiso leh si ay ula macaamilaan labada saaxiibada jira iyo kuwa cusub. Rawr wuxuu adeegsadaa "3D avatar chat," taas oo macnaheedu yahay inaad adigu mataleyso sida muuqaal aduunka ah.
Download oo fur furka app , kaas oo laga heli karaa oo kaliya mobile, oo aad kuxasuusta si aad u habeysiiso avatar aad si ay u bilaabaan.
Heerka qalabixintu waa wax cajiib ah - wax kasta oo ka yimaada muuqaalka jirka illaa midab indhaha timaha wajiga iyo duleelka ayaa la bedeli karaa, bilaash ah.
Markaad si haboon u qalabeysid, waxaad ka heli kartaa asxaabta hadda jirta adoo siinaya app adoo isticmaalaya xiriirada taleefankaaga, ama ku xirida app kaaga xisaabtaada Facebook, laakiin sidoo kale hel saaxiibo cusub qaybta Globetrotter.
Kaliya ku dhufo Globetrotter hoosta shaashadda, kadibna ku dheji Bilowga .
Waxaad la hadli kartaa saaxiibo cusub oo qolka soo galaya, sidoo kale waxay ku siin karaan sawir aad ku sameyso ficilo sida #dance, ama #wave. Rawr waa bilaash inaad isticmaasho, waxaana sidoo kale ku jira "saldhig" meesha aad ka iibsan kartid alaabta si aad u sameysid sawirkaaga.
Barnaamijku wuxuu isku daraa fududaanta barnaamijka doodda iyo madadaalada ciyaaraha fiidiyowga si loo abuuro hab cusub oo lagu dhexdhexaadin karo.
Marka xigta: Abuur qolka wada sheekeysiga gaarka ah ee fiidiyoowga leh ee gurigaaga
Guriyeynta: Isgaadhsiinta loogu talagalay kooxaha
La sheekeyso ilaa 7 saaxiibo ah markaad timaaddo muuqaalka guriga. Guri guri
From the kuwa Meerkat yimaado jiilka xiga ee wada-hadalka video. Ku soo dhawoow Guriga, barnaamij cusub oo fiidiyoow ah oo kuu ogolaanaya inaad ku sheekeysid waqti dhab ah ilaa toddoba saaxiibo.
Meerkat, oo ah barnaamijka fiidiyoowka ah ee fiidiyoowga ah oo awood u siiyay qof walba inuu u faafiyo dadweynaha guud, wuxuu helay faa'iido aad u ballaaran markii uu billowday, inuu helo 28,000 toddobaadkii ugu horreeyay.
Wax badan oo ka mid ah guushaasi waxay sababtay isdhaafsiga barnaamijyada Twitter; Twitter-ka ayaa si toos ah loogu diri jiray taageerayaasha telefishanka markii uu bilaabay fadhiga. Laakiin darbiyadu waxay hoos u dhaceen markii Twitter uu Meerkat ka gooyey garaafka bulshada - taasoo micnaheedu yahay in tweet-ka casriga ah aan loo dirin - taasoo si weyn u yareeysay tirada dadka ka warramay barnaamijyada live-ka.
Kadib, sida fiidiyoow ah, Twitter ayaa bilaabay adeeggooda akhristaha, Periscope, oo ay ku xigto bogga internetka ee Facebook Live, oo samaynta muuqaalka muuqaalka leh ee tartanka ku jira.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Meerkat waxay baranayeen cashar muhiim ah: daabacaadyada nool ayaa hoos u dhigaya. Inkastoo bilawgii taariikhda Meerkat ay dadku si joogta ah u socdeen, haddana durdurradaasi waxay noqdeen kuwo aan badneyn - toddobaadle, ama bil kasta, marka loo eego maalin kasta. Halbeegga "halbeegyo badan" ayaa ahaa daaqad.
Gali guriga, barnaamijka cusub ee kooxda Meerkat, halkaas oo diiradda la saaro "wada jirka wada jirka" saaxiibo. Barnaamijku wuxuu si gaar ah u adeegaa sida casriga ah, qolka wada sheekeysiga video.
Download oo fur furan app oo waxaa laguu keenayaa inaad ku soo gasho cinwaanka emailkaaga, magaca, magaca isticmaalaha, iyo password. Waxaad markaa xaqiijin doontaa lambarka taleefankaaga gacanta (Guriggu wuxuu heli karaa oo kaliya app app ah), iyo in laguu oggolaado inaad u oggolaato helitaanka xiriirkaaga si aad u heshid asxaabtaada app.
Waxa kale oo aad toos u diri kartaa asxaabta iyo martiqaad. Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan waa awoodda lagu xiro "chat lock", taasoo keentay qol gaar ah oo fiidiyoow ah oo loogu talagalay ilaa siddeed qof.
Inta badan dadka isticmaala guryaha guryuhu waxay ka yar yihiin da'da 25 (waxay ka dhalatay suuq geynta shirkadaha iskuulada iyo jaamacadaha), iyo barnaamijka, oo ay isticmaalaan in ka badan hal malyan oo qof, ayaa lagu qeexay "shabakadda bulshada ee Generation Z. "
Guriyeynta loogu talagalay iOS
Guryaha Wada-hadal ee Gaarka ah
Sida Loo Adeegsado Faafinta Internetka Faafin ah (MIME) Waxay ka shaqeysaa
Sida Laguugu Fiirsado Movies ka Dukaanka Munaasabadda Munaasabadaha iTunes
Kombiyuutarka GIMP Kombiyuutarada Gaaban
Nuqus Webkaada adoo isticmaalaya FTP
Learning Deep: Machine Learning at Its Finest
Sida Loo Helo Qofka Cinwaanka Emailka Adigoo isticmaalaya "soc.net-dadka"
Ku qorida HTML Macintosh TextEdit
8-tii ugu wacan ee macaamiisha kulul ee lagu iibsado sannadka 2018
Shuruudaha Nidaamka Nadaafadda ee San Andreas Grand
Top 9 Ciyaaraha ugu xooga badan ee Xbox
Isticmaalida cinwaanka raadinta cinwaanka si aad u hesho Dadka Online
U Isticmaal Dhaqdhaqaaqa iTunes Hoosaadyada Kumbuyuutarka ee Windows
Dib u eegida UberConference
Lenovo G50-70 15-inch Budget Review Laptop PC
Shirkadda Tamarta Iskaashatada CS-30 Sound Bar: No Frills, Sound Solid
Ku dhaji sharraxaha qoraalka leh Miisaaniyada Mac OS X Mail
Ma ku daabici kartaa White Naas?
Fiidkii iPhone Fiirfiirinta Falanqaynta App Flash
Snapchat Blocked Apps-ka Sidee, Sideen Maxay?
Goobaha iyo Fikradaha Waalidka ee Gabdhaha
Becky! Internet Mail 2.60 - Barnaamijka Windows Email
Sida loo bilaabi karo xirfad ku leh Websaydhka
Sidee looga guuleysan karaa guurka furaha!